AddEvent: Yongeza kwiKhalenda yeeNkonzo kwiiWebhusayithi kunye neeleta zeendaba | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 17, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Ngamaxesha athile, ihlala ilula yemisebenzi ebangela ukuba abaphuhlisi bewebhu babe neentloko eziphambili. Enye yazo ilula Yongeza kwiKhalenda iqhosha olifumana kwiindawo ezininzi ezisebenza kwiinkqubo eziphambili zekhalenda kwi-intanethi kunye nokusetyenziswa kwe desktop.
Ngobulumko babo obungenasiphelo, amaqonga abalulekileyo eekhalenda awazange avumelane ngomgangatho wokusasaza iinkcukacha zomnyhadala; ngenxa yoko, ikhalenda nganye enkulu inefomathi yayo. I-Apple kunye neMicrosoft yamkelwe .ics iifayile njengefomathi… ifayile yokubhaliweyo ecacileyo eneenkcukacha ezikuyo. UGoogle, njengenkonzo ekwi-Intanethi, usebenzisa i-API yakhe ukwenza ulwazi ngemicimbi.
Yintoni iFomathi ye-ICS
Ikhalenda ye-Intanethi kunye nokuCwangciswa kweNgcaciso yeNqaku loLwazi luhlobo losasazo oluvumela abasebenzisi ukugcina nokutshintshisa ikhalenda kunye nokucwangciswa kwedatha enje ngeziganeko, ii-dos, ukungena kwamaphephancwadi, kunye nolwazi olukhululekileyo / oluxakekileyo. Iifayile ezifomathiweyo ngokwenkcazo zihlala zinokongezwa kwee .ics.
YongezaEvent yinkonzo encinci enkulu ekhupha ikhowudi eyimfuneko kunye neefayile ukongeza okanye ukubhalisela iiKhalenda zika-Apple, iikhalenda zikaGoogle ezikwi-Intanethi, Outlook, Outlook.com, nakwi-intanethi ye-Yahoo! iikhalenda. I-AddEvent ibonelela ngezixhobo ezikwi-intanethi kunye ne-API ukuze wenze ngokwezifiso ii-Add to Calendar links kunye namaqhosha nangona ungathanda.
Yongeza iinketho zeEvent kunye nezixhobo ezibandakanya
Yongeza kwiQhosha leKhalenda (kwiiwebhusayithi) -indlela ekhawulezayo nengazinzanga yabasebenzisi bakho yokongeza imicimbi yakho kwiikhalenda zabo. Kulula ukuyifaka, ukuzimela-ulwimi, indawo yexesha, kunye ne-DST ehambelanayo. Isebenza ngokugqibeleleyo kuzo zonke izikhangeli zangoku, iipilisi, kunye nezixhobo eziphathwayo.
Ikhalenda yokubhaliselwa (iminyhadala) -ongeza ngokulula iminyhadala emininzi kwiikhalenda zomsebenzisi ngokubhalisela ikhalenda oyenzileyo. Unokwenza notshintsho kwikhalenda yakho, kwaye olo tshintsho luya kubonakala kuzo zonke iikhalenda zababhalisi bakho.
iziganeko (kwincwadana yeendaba kunye nokwabelana ngentlalo) - yenza abasebenzisi bongeze imicimbi yakho kwiikhalenda zabo nokuba bafunda phi ngazo - nokuba ziincwadana zeendaba, imidiya yoluntu njengoFacebook okanye iTwitter, okanye izixhobo zomkhankaso ezifana MailChimp, Marketo, okanye Salesforce. Isixhobo somnyhadala we-AddEvent senza ukuba kukhawuleze kwaye kungabi buhlungu kuwe ukwenza umsitho ngephepha lawo lokufika onokuthi wabelane ngalo kumajelo asekuhlaleni, okanye ulisebenzise njengekhonkco kwiileta zeendaba kunye nezixhobo zomkhankaso.
Indlela ngqo ye-URL (nee-API's) -ilinki enokusetyenziselwa ukwenza umsitho kubhabho, okanye uthumele abasebenzisi bakho kwinkonzo yekhalenda yabo apho banokongeza khona umsitho, okanye baxhome umcimbi wakho kwi-imeyile oyithumela kubasebenzisi bakho. .
Yiplatifti eyomeleleyo, elula, kwaye eluncedo enceda ngokwenene ababhalisi bakho kunye nabasomashishini. Nokuba uyakha iqonga kwaye ufuna ukongeza ukusebenza kwikhalenda okanye ukuba lishishini nje elihambisa isikhumbuzi somsitho kuwo wonke umntu, iAddEvent liqonga elihle. Banikezela:
IkhalendaX - ikhalenda enokungeniswa, ikhalenda yobhaliso, kunye nenkonzo yokuqokelelwa kwedatha zonke zisongelwe kwenye. Njengekhalenda enokungeniswa, yenza ukuba imicimbi yakho ibonakale inobuhlobo kubasebenzisi bakho ngokubanika ikhalenda yokwenyani ukuba bajonge kwiwebhusayithi yakho. Njengekhalenda yokubhalisela, ivumela abasebenzisi bakho ukuba bongeze ngokulula iminyhadala yakho kwiikhalenda zabo kwaye bahlale behlaziyiwe kulo naluphi na utshintsho lomsitho (ngokufana nesixhobo seKhalenda yokuBhalisela, nangona kukho ezinye iinketho kunye nohlalutyo olunzulu).
Uhlalutyo - Landa umkhondo, umcimbi-wongeza, ababhalisile kwikhalenda, kunye nokuninzi. Uhlalutyo lubonelela ngedatha ebalulekileyo malunga neyakho iikhalenda neziganeko yenziwe ngeDashboard okanye Ikhalenda kunye neMicimbi ye-API.
Zama iAddEvent simahla
Ukwazisa: Martech Zone usebenzisa amakhonkco adibeneyo kweli nqaku.
tags: yongeza kwikhalendayongeza kwikhonkco lekhalendaYongezaikhalenda yeapileikhalenda APIikhalenda yorhumoikhalenda Xikhalenda enokungeniswaiphepha lokufika komnyhadalaIkhonkco lomsithoikhalenda kaGooglemailchimpuphawuikhalenda yokubonaoutlook.com ikhalendaukuthengisaikhalenda yorhumoikhalenda ye-yahoo
Ngobuqili: Uqhuba njani ngakumbi kwi-B2B ekhokelela kwi-LinkedIn yokuThengisa